Sirayeli - big time isimilo | Apg29
Sirayeli - big time isimilo
Ngaba simele sibe nokuqonda mkhulu lonke ixesha abalinganiswa - uSirayeli?
Ke kaloku amaYuda abuyela kwilizwe lawo zangaphambili kwaye soze kunyanzeleka bemke kwelo zwe. Kuye uThixo waceba Amosi 9: 14-15.
Ukuba abanayo thina, akumangalisi ukuba baqonde bonke abanye ntoni.
Kuzo zonke iimpawu ixesha lokuba isiprofeto seBhayibhile unika njengoko benchmark for xa sinokulindela ukubuya kukaYesu kwenzeka, isimo inkulu zakwaSirayeli kunye nokubuyiselwa amaYuda ukuqokelela.
ukuzaliseka zingenakuphikwa iziprofetho
Kukho inzaliseko lesiprofeto ethe uyaphila yenzeka kwisizukulwana ngoku kwaye oko elingenakuphikiswa. Ukuzaliseka ke njengokuba kucacile kwaye epheleleyo njengoko iza kukhokela ubuncinane onke amakholwa. Sicinga amaYuda abuyele ezweni ukuba kanye malunga 2000 kwiminyaka eyadlulayo kwanyanzeleka kude.
Le mpumelelo kangaka kakuhle liqinisekile ukuba akukho ngaphantsi kwe-14 ngaphandle iincwadi zeTestamente eNdala umntu ukufumana oku. Oku kuthethwa kwiindawo ezingaphezu kwe-60 kwiincwadi umprofeti.
Oku akukho malunga nomba ukuchazwa, umyalezo ucacile; UThixo uya kuqinisekisa ukuba abantu baya kubuyela lizwe. Kwakhona ngale buyela kuqhutywa kuzo zonke indawo.
Thina enza apha kuphela ezinye zezi zicatshulwa njengemizekelo ungajonga kwaye ufunde:
Ke kaloku amaYuda abuyela kwilizwe lawo zangaphambili kwaye soze kunyanzeleka bemke kwelo zwe. Kuye uThixo waceba Amosi 9: 14-15:
"Ndiya kwenza abantu bam ekuthinjweni amaSirayeli. Baya kwakha imizi engamanxuwa, baze bahlale kuyo. Batyale izidiliya, basele iwayini yazo. Benze imiyezo, badle iziqhamo zazo. Ndiya kubazinzisa emhlabeni wabo. Bangabi kuncothulwa lizwe lona, ​​itsho iNkosi uThixo wenu. "
"Iziprofeto zeBhayibhile zizaliseka ngexesha lethu."
Kwiminyaka embalwa edlulileyo wacaphula Israeli Prime Minister Netanyahu esi siprofeto yeBhayibhile lokuvula kwesithethe i-UN kaThixo. Wakwenza oku phambi zonke iintlanga abo babehlanganisene khona kwi-UN. kubukho bukaThixo ngoko liye ukuvile oko uThixo akwenzileyo oko wathembisa abantu yamaYuda.
Emva Netanyahu wacaphula indinyana yeBhayibhile e Amos, wavakalisa:
Njengoko ukuba angakwenza phambi abameli beentlanga UN, wobeka phi na oku zivakaliswe kuzo zonke pulpiti zamaKristu!